Ny fandaniana fizahan-tany any Amerika Avaratra dia nidina 74.1% tamin'ny taona 2020
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Ny fandaniana fizahan-tany any Amerika Avaratra dia nidina 74.1% tamin'ny taona 2020
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Brezila • Cruising • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao lafo vidy • fivoriana • Vaovao Mafana any Mexico • Vaovao • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • fiantsenana • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ny fanarenana tombanana nataon'i Amerika Avaratra dia taorian'ilay marimaritra iraisana momba ny dia an-tany fa ho sitrana aloha ny fizahan-tany any an-toerana amin'ny 2022, fa ny olona tonga eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena kosa dia tsy hahasitrana raha tsy amin'ny 2024.
Ny totalin'ny fahatongavan'ireo iraisam-pirenena tao amin'ny faritra dia nidina 67% isan-taona tamin'ny taona 2020.
Ny fandaniam-bola miditra amin'ny faritra dia nihena 74.1%.
Ny vinavinan'ny fandaniam-bolan'ny fizahan-tany miditra dia manondro fa tsy hihoatra ny ambaratonga alohan'ny aretina pandia raha tsy aorian'ny 2025.
Ny tanjona manerana an'i Amerika Avaratra (Etazonia, Meksika ary Kanada) dia amin'ny dingana samihafa amin'ny fampandrosoana fizahan-tany. Na izany aza, antony iray iraisana ny fiatraikan'ny valan'aretina COVID-19 tamin'ny taona 2020 ho mafy ny fahatsapana ho an'ny toekarem-pizahantany tsirairay avy.
Ny tatitra farany momba ny 'Market Destination Market Insight: Amerika Avaratra (2021)' dia nahatsikaritra fa ny totalin'ny fahatongavan'ny firenena tany amin'ny faritra dia nihena 67% isan-taona (YoY) tamin'ny taona 2020 ary nandany 74.1%. Ny fanarenana tombam-bidin'i Amerika Avaratra dia taorian'ny fifanarahana ankapobeny momba ny dia fa ny fizahantany ao an-toerana dia ho sitrana aloha (2022), fa ny fahatongavan'ireo iraisam-pirenena dia tsy hahasitrana raha tsy amin'ny 2024. Ny vinavinan'ny fandaniam-bola amin'ny fizahan-tany mialoha anefa dia manome sosokevitra fa tsy hihoatra ny ambaratonga alohan'ny pandemia izany raha tsy aorian'ny 2025.
COVID-19 dia mbola azo fantarina ho fandrahonana lehibe indrindra amin'ny fitomboana eo amin'ny sehatry ny fitsangatsanganana, ary any Amerika Avaratra dia tsy misy hafa amin'izany.
Ny fahaverezan'ny fandaniam-bolan'ny mpizahatany miditra amin'ny taona 2020 (-74.1%) hatramin'ny USA, Mexico ary Kanada nisy dikany. Ny vinavinan'ny toetr'andro farany dia milaza fa tsy antenaina ho sitrana tanteraka izy ity aorian'ny 2025, ary izany no iray amin'ireo anton-javatra lehibe misy fiatraikany amin'ny fanarenana ara-toekarena ho an'ny faritra ao anatin'ny taona vitsivitsy.
Iray amin'ireo tombony lehibe azo amin'ny fizahan-tany miditra ny fandaniam-bola, izay afaka mampisondrotra ny vola miditra amin'ny toekarena, mandrisika ny asa ary mitarika ho fampandrosoana ny fotodrafitrasa. Ny toerana itodiana tsirairay dia mitazona tolotra fizahan-tany matanjaka, saingy tsy azo ianteherana irery izany mba hanonerana ny firodanan'ny dia iraisam-pirenena.
Ny fandehanana any Amerika Avaratra avy amin'ny toeran-tany hafa manerantany dia mety lafo. Ny fanadihadiana natao vao haingana dia nahatsikaritra fa 23% n'ireo mpamaly manerantany no nampihena ny tetibolam-pianakaviany tamin'ny taona lasa ary 27% no "nampihena" azy ireo. Ny tetibola mihena dia midika fihenan'ny fandaniana amin'ny fialam-boly misy fiantraikany amin'ny fahafaha-mivezivezy. Ny famerana ny tetibola dia ho zava-dehibe kokoa amin'ny fividianana traikefa amin'ny dia mandritra ny taona vitsivitsy, izay mety hanohintohina ny fanarenana fizahan-tany any Amerika Avaratra raha oharina amin'ireo faritra hafa manerantany.
Noho ny akaiky, ny fifandraisana ary ny mpifaninana mpampita vola lafo vidy (LCC), dia mety ho mora vidy ny fivezivezena eo anelanelan'i Etazonia, Kanada ary Mexico, izay mandrisika ny toerana hitodiana. Zava-dehibe ny fitsangatsanganana an-tsokosoko amin'ny fanarenana ny fizahan-tany any Amerika Avaratra. Ny toerana aleha tsirairay dia efa miankina betsaka amin'ny toerana akaiky azy ho loharanom-bola lehibe ahazoana vola.
Manomboka amin'ny velaran-tany voajanahary midadasika, anisan'izany ireo faritra amoron-tsiraka, valan-javaboary ary tandavan-tendrombohitra hatrany amin'ireo tanàna be olona feno fari-kolontsaina, Amerika Avaratra no mahazo tombony amin'ny fanomezana fizahan-tany matanjaka. Noho izany, misy karazan-javatra misintona maro izay mitaona ny mpitsidika manerantany hialana voly sy asa. Ho fanampin'ny toeran-kaleha manintona hotsidihina, ny tsenan'ny VFR (mpamangy namana sy havany) lehibe dia singa matanjaka ihany koa. Ny fiaraha-miasa eo amin'ny fikambanan'ny mpivarotra (DMO) sy ny governemanta dia zava-dehibe amin'ny fiantohana ny fanampiana ara-toekarena ho an'ny faritra mandroso.